Azo atao vavaka ho an'ny fitsapana ny zom-pirenena - Fifindrà-Monina
tsy hisokatra ny app-ko verizon
maninona no mandeha mivantana amin'ny mailaka ny telefaona
maninona ny iphone 7 glitching-ko
Sazy mety hitranga amin'ny fitsapana ny zom-pirenena
Mety fehezanteny an-tsoratra ho an'ny olom-pirenena amerikana misy ohatra. Mpanana karatra maintso ve ianao manantena ny ho tonga olom-pirenena amerikana voajanahary? Raha izany dia tsy vitan'ny hoe mila mahafeno ireo fepetra takiana amin'ny fahazoana alalana sy mametraka fangatahana ianao, fa amin'ny farany, dia mila mampiseho amin'ny fahafaham-pon'ny tompon'andraikitra amerikana iray anananao:
Fahatakarana fototra ny teny anglisy, ao anatin'izany ny fahaizana miteny, mamaky ary manoratra teny sy fehezanteny tsotra mahazatra ary
fahalalana fototra sy fahatakarana ny tantaran'i Etazonia sy ny governemanta amerikana, fantatra ihany koa amin'ny hoe sivika.
Ny fitsapana anglisy mba ho lasa olom-pirenena amerikana voajanahary
Ny iray amin'ireo fepetra ilaina indrindra amin'ny fahatongavanao ho olom-pirenena A.S. dia ny ahafahanao mampiseho ilay Serivisy momba ny zom-pirenena amerikana sy ny fifindra-monina (USCIS) fa afaka mamaky, miteny ary manoratra anglisy fototra . Hanao izany ianao mandritra ny fanadihadihana ataon'ny olona momba ny fangatahanao ho voajanahary ao amin'ny USCIS Form N-400 . Ity resadresaka ity dia mazàna volana vitsivitsy aorian'ny andefasanao ny Form N-400 anao.
Tsy maintsy mamaky fehezanteny iray na telo amin'ny teny anglisy ianao amin'ny mpandinika USCIS. Mila manoratra fehezan-teny iray na telo amin'ny teny anglisy ihany koa ianao aorian'ny famakiana mafy ny mpiasan'ny USCIS. Ary, mila manaraka ny torolàlana momba ny mpandinika ianao ary miresaka aminy momba ny fampahalalana nomenao momba ny fangatahana zom-pirenena amerikana.
Fitsapana ny fampiharana ny zom-pirenena amerikana - fitsapana amin'ny teny anglisy (famakiana)
Ho an'ny ampahany amin'ny famakiana ny fizarana anglisy amin'ny fitsapana ny zom-pirenena dia angatahina ianao hamaky mafy ny iray amin'ireo fehezanteny telo. Hifantoka amin'ny resaka sivika sy ny tantara ny atiny ary hizaha toetra ny fahaizanao mamaky amin'ny teny Anglisy. Raha mianatra momba ny fizarana famakiana ny fanadinana voajanahary, dia tokony hahazo aina amin'ireo teny voambolana manaraka ianao:
Famakiana voambolana ho fitsapana ny zom-pirenena
People Civics TOERAM fety
George Washington Sainan'ny Amerikanina
Volavolan-dalàna momba ny zon'olombelona
fanjakana / fanjakana
trano Fotsy Amerika
Etazonia Andron'ny filoha
Teny Fanontaniana matoanteny Hafa (Function) Hafa (atiny)
manao / manao
manana / manana
dia / a / dia / ho
fiainana / niaina
Fitsapana ny fampiharana ny zom-pirenena amerikana - fitsapana amin'ny teny anglisy (fanoratana)
Ho an'ny ampahany voasoratra ao amin'ny fizarana anglisy amin'ny fanadinana voajanahary, dia angatahina ianao hanoratra iray amin'ireo fehezanteny telo tsara. Ny atin'ny fitsapana dia hifantoka amin'ny lohahevitra sivika sy tantara. Mba hanomanana fiomanana amin'ny fanadinana dia tokony hahazo aina ireto teny voambolana manaraka ireto ianao:
Manorata voambolana ho an'ny fitsapana ny zom-pirenena
People Civics TOERAM VOLANA
Washington Karana Amerikanina
trano Fotsy Alaska
Washington, D.C. février
fety matoanteny Hafa (Function) Hafa (atiny)
dia / was / be
dimampolo / 50
zato / 100
Misy fanavahana amin'ny fitsapana anglisy ve?
Amin'ny tranga sasany, araka ny voalaza etsy ambony, dia esorina ny fepetra takiana amin'ny fitsapana amin'ny teny anglisy ny amin'ny zom-pirenena amerikana.
Ireo no antsoina hoe fanalahidy 50/20 sy 55/15. Raha efa mponina maharitra ara-dalàna (LPR, na manana karatra maintso) ianao farafahakeliny 20 taona, ary mihoatra ny 50 taona ianao dia tsy voatery handray ny fanadinana anglisy ary afaka mandray ny dinidinika momba ny zom-pirenena amin'ny ny tenindrazanao Na dia tsy nitohy aza ny 20 taona dia tsara kokoa raha fohy ny tsy fahatongavana tany Etazonia.
Toy izany koa, ny fanavotana 55/15 dia mihatra raha manana karatra maintso ianao, 55 taona no ho miakatra, izay efa tany Etazonia nandritra ny 15 taona farafaharatsiny.
Misy ihany koa ny famotsorana raha toa ianao ka manana kilema ara-batana na ara-tsaina manakana anao tsy hianatra teny anglisy. Mba hahazoana izany fanavotana izany dia mila manao sonia ny endrika N-648 ny dokotera iray, manazava ny kilemanao, amin'ny anaranao. Mariho fa ny fepetra takiana amin'ity fanavotana ity dia somary henjana, ary ny mpisolovava anao dia tokony hiditra amin'ny fanomanana azy raha ilaina izany.
Inona no hitranga raha tsy mandalo ny fitsapana anglisy momba ny zom-pirenena aho?
Raha tsy mandalo ny andrana voalohany ianao dia hahazo fotoana faharoa hanaovana fanadihadiana mandritra ny 90 andro aorian'ny dinidinika voalohany. Azo alaina amin'ny alàlan'ny tranokala USCIS ireo fitaovam-pianarana. Azonao atao koa ny mangataka amin'ny mpisolovava anao amin'ny fomba tsara indrindra hiomanana; efa niatrika olona maro tamin'ny toe-javatra iainanao izy ary ho loharano tsara.
Ahoana no fomba hahatongavan'ny olona iray mizaka ny zom-pirenen'i Etazonia?
Voalohany, tantara kely. Misy fomba telo lehibe hahatongavana ho olom-pirenena amerikana.
Ny voalohany dia hoe teraka tany Etazonia ve ny olona iray na olom-pirenena amerikana ny ray aman-dreny na teraka tany ivelan'i Etazonia (na tamin'ny fotoana nananganana ny zaza). Na izany na tsy izany, tonga olom-pirenena amerikana hatrany ilay olona teraka.
Ny fomba faharoa dia antsoina hoe fahazoana zom-pirenena, ary mety hitranga izany rehefa lasa olom-pirenena amerikana voajanahary ny ray aman-drenin'ny zaza manana karatra maitso amerikana.
Ny fomba fahatelo dia antsoina hoe naturalization. Dingana manokana izay ahafahan'ny mponina maharitra ara-dalàna izay nanana karatra maintso nandritra ny taona maromaro (matetika dimy) no lasa olom-pirenen'i Etazonia raha mahafeno ny fepetra takian'ny lalàna mifindra monina any Etazonia izy ireo.
Exception: Iza no afaka misoroka ny fanadinana anglisy?
Ny mpangataka sasany dia tsy mila mahafeno ny fepetra takiana amin'ny teny anglisy; izany hoe, afa-maina izy ireo amin'ny fampisehoana fa mahay mamaky teny sy miteny ary manoratra amin'ny teny anglisy izy ireo. Tsy mila mandray ny fanadinana anglisy ianao raha:
50 taona na mihoatra ary efa nonina tany Etazonia nandritra ny 20 taona farafahakeliny, na
55 ianao na mihoatra ary efa nonina tany Etazonia nandritra ny 15 taona farafaharatsiny.
Ny fitsapana sivika sy tantara ho lasa olom-pirenena amerikana
Tokony hanana fahatakarana fototra momba ny tantara sy ny governemanta any Etazonia ianao. Ho an'ity fitsapana ity dia manome mora ny USCIS a lisitr'ireo fanontaniana 100 inona no azon'izy ireo atao. Hanontany anao fanontaniana maromaro ny tompon'andraikitra USCIS, saingy tsy mihoatra ny folo amin'ity lisitra ity, toy ny:
Inona ny lalàna faratampony?
Manonona sampana na ampahany amin'ny governemanta.
Fa maninona no niady tamin'ny anglisy ny mpanjanatany?
Inona no nataon'i Martin Luther King, zanany?
Mba hahavitana ilay fanadinana dia tsy maintsy mamaly tsara farafahakeliny enina amin'ireo fanontaniana folo ianao.
Exception: Iza no afaka misoroka ny fanadinana civics?
Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, ny mpangataka dia mila maka ny fanandramana tantara sy sivilika, na dia tsy ilaina aza ny fandraisan'izy ireo ny fitsapana anglisy. Na izany aza, misy fitsipika manokana sasany:
Raha 50 taona no ho miakatra ianao ary monina any Etazonia mandritra ny 20 taona farafahakeliny dia azonao atao ny mandray ny fitsapana civika sy tantara amin'ny fiteninao.
Raha 55 taona no ho miakatra ianao ary monina any Etazonia mandritra ny 15 taona farafaharatsiny dia azonao atao ny mandray ny fitsapana ny sivilizasiona sy ny tantara amin'ny fiteninao.
Raha 65 taona ianao na mihoatra ary efa nipetraka tany Etazonia maharitra 20 taona farafahakeliny, dia tsy vitan'ny hoe afaka manala fanadinana amin'ny fiteninao fotsiny ianao, fa tsy mila mandinika ireo fanontaniana 100 rehetra. Fa kosa, misy fanontaniana 20 amin'ny 100 tokony hainao valiana (tadiavo ireo asterisk ao ny lisitra USCIS ).
Fanafahana manokana ho an'ny kilemaina
Ny mpangataka iray dia mety mandingana ny fitsapana anglisy ary handray ny fitiliana tantara sy sivilizansa amin'ny fitenin-drazany raha manana fahasembanana ara-batana na ara-pivelomana na fahasembanana ara-tsaina izay mahatonga azy tsy afaka hianatra na haneho fahalalana momba ny Anglisy Anglisy. Na, ny kileman'ilay mpangataka dia afaka manafaka azy amin'ny fitsapana roa.
Ohatra, ny mpangataka iray miaraka amin'i Alzheimer dia mety tsy mila manao fitsapana raha tsy manakana azy ireo hianatra sy tsy hahatadidy fiteny vaovao sy zava-misy momba ny sivika any Etazonia ny mpangataka.
Mba hahafeno fepetra amin'ity fanavotana, fahasembanana na fahasembanana ity:
tokony farafahakeliny herintaona, na antenaina haharitra farafahakeliny herintaona, ary
tsy vokatry ny fampiasana zava-mahadomelina tsy ara-dalàna izany.
Ho fanampin'izany, ny dokotera na psikology dia tsy maintsy manazava sy manaporofo ny fahasembanana na fahasembanana ary ny fomba mahatonga ilay olona tsy afaka mianatra na mandray fitsapana anglisy sy sivika. Ny dokotera na psikology dia tsy maintsy manao izany amin'ny famitana ny
USCIS dia hampiasa ezaka mety hanampiana anao hiatrika fanadinana. Raha heverinao fa mila fanampiana manokana ianao (antsoina hoe trano onenana araka ny lalàna), toy ny mpandika tenin'ny tanana na fitaovana amin'ny teny Braille, dia misy toerana amin'ny fangatahana naturalization hahafahanao milaza amin'ny USCIS ny zavatra ilainao.
Miomana amin'ny fitsapana
Raha mbola tsy nianatra tany Etazonia ianao dia mety te handinika kilasy anglisy sy / na tantara sy olom-pirenena ao Etazonia Matetika izy ireo dia antsoina hoe kilasy fizakàna. Azo inoana fa ho hitanao ao amin'ny sekoly na olon-dehibe eo an-toerana izany. Azonao atao ihany koa ny mahita fitaovana na miditra amin'ny Internet amin'ny tranomboky eo an-toerana.
Betsaka koa ny olona mampiasa ny fitaovam-pianarana maimaim-poana amin'ny tranokala USCIS.
Fanontaniana ho an'ny mpisolovava anao
Hafiriana no haharitra eo anelanelan'ny fotoana andefasako ny fangatahako ho voajanahary sy ny filàko ho vonona handray ny fanadinana anglisy sy Etazonia ary sivika civics?
Raha tsy mandalo ny fitsapana anglisy na tantara ary civika aho dia afaka mandray azy indray? Hafiriana no tokony hiandrasako eo anelanelan'ny fitsapana?
Ny raiko dia mijaly noho ny fahaverezan-tsaina, izay niharatsy hatrany hatramin'ny nametrahany fangatahana naturalization. Manana ny rakitsorany ara-pitsaboana avy amin'ny dokoterany any Mexico aho. Ho ampy ve izany hahatonga anao tsy hanaiky ny fitsapana anglisy sy tantara ary sivika?
Fepetra takiana amin'ny Visa amin'ny asa any Etazonia
Fiantohana ara-pitsaboana tsy misy fiantohana ara-tsosialy ho an'ny Undocumented
Midika inona ny fitsapana ara-pitsaboana ny fifindra-monina?
Maharitra hafiriana ny fanodinana ny zom-pirenena amerikana?
Azoko ampiasaina ve ny isa Itin hiasa?